Yakatangisa yechina yekutarisa vhezheni yeWindows Terminal | Linux Vakapindwa muropa
Munguva yegore ra2019 yeVagadziri Vayo Vakavaka Musangano, Microsoft yakatora mukana wekuzivisa iyo nyowani yeWindows raiti mutsara interface inonzi Windows Terminal. Ipapo Microsoft yakatsanangura izvo yakagadzirirwa kuve nzvimbo yepakati yekuwana nharaunda senge PowerShell, Cmd, uye Windows Subsystem yeLinux (WSL). Vagadziri vanogona kuzvijairira nenzira dzakasiyana siyana uye nekuwedzera madingindira nekuwedzeredzwa kwazviri.
Yekutanga yekutanga yeWindows Terminal nyowani yakaonekwa muna Chikumi apfuura. Yakateverwa neyechipiri yekutarisa muna Chikunguru. Panguva iyi mukati memwedzi uno waNyamavhuvhu, Microsoft haina kuburitsa kwete imwe, asi maviri ekutanga mawindow eWindows Terminal: yechitatu yekutarisa pakutanga kwemwedzi uye nezvimwe munguva pfupi yapfuura Windows Terminal Preview v0.4, yechina vhezheni ichangobva kuwanikwa paMicrosoft Store uye GitHub.
Microsoft inotarisira kuburitsa yekupedzisira vhezheni 1.0 yeayo nyowani mashandisiro munguva ino yechando Uye panguva ino, fungidziro dzinofanira kutevera nekukurumidza.
Uku kuongorora kutsva Windows Terminal Microsofr inoratidza kuti ine maficha nyowani akawedzerwa, dzakadai se tsigiro yematebhu akawanda, kugona kuisa kumashure mifananidzo, pamwe nekugona kudzora opacity yemamiriro ekunze uye eruvara zvirongwa, uye nezvimwe.
Iko kumisikidzwa kunochengetwa mumafaira eJSON. Zvakare zvinosanganisirwa idudziro yekhibhodi nzira pfupi, kutanga nhamba yemitsara nemakoramu, marongero efonti, uye rairo yekumhanya kana uchivhura tebhu nyowani.
Yechina yekutarisa yeWindows Terminal zvakare inopa zvitsva uye chimwe chezvinyanya kukosha pamwe kuiswa kwechinyorwa muHTML.
Zvino kana runyorwa rwemavara rwasarudzwa nekuteedzerwa kubhodhibhodhi, Terminal inonyora iwo mavara akasarudzwa kune clipboard muHTML fomati.
Izvi zvinobvumidza mushandisi kunama zvemukati zverudzi urwu kune zvimwe zvinoshandiswa seMicrosoft Outlook kana Izwi. Iyo clipboard ichagara ichiteedzera iyo HTML data neyakajairika zvinyorwa.
Zvakare Microsoft inosimbisa kuti inofanirwa kucherechedzwa kuti mafaera.json faira akatamiswa kubva kuRoamingState folda kune iyo LocalState dhairekitori kudzivirira marongero kubva kungoerekana aendeswa kune ako mamwe majaira uye kugadzirisa dzimwe nyaya dzinokonzeresa kuti mudziyo urembedze.
Zvakare, kana paine dambudziko nemaprofiles.json yako faira, chishandiso chinoratidza mhosho meseji inotsanangura izvo zvisizvo. Kana yako profiles.json faira risingakwanise kuverenga nemazvo, chishandiso chinoshandisa ayo ekumisikidza marongero. Nekudaro, hazvizotsiva yako iripo yekumisikidza faira.
Mune vhezheni v0.3, Microsoft yakaunza paramende "TabTitle" iyo yaibvumidza vashandisi kumisikidza iyo tabo musoro wenyaya yega yega muzvirongwa.
Kushandisa uku kuseta kunodarika iyo tabo caption yakapihwa neProfile Shell. Microsoft chimiro ichi chachinja mushanduro 0.4.
Kubva zvino, tebhu remusoro richagadzika kuzita rezita panzvimbo penzira yeaizoitisa. Kana mushandisi achida kushandura izvo zvinoshandiswa sezita rekumisikidza, ingoshandisa tabTitle kutsiva zita rezita patabhu.
Kujekesa, iro zita reShell ndiro zita rinopihwa neyekuraira mutsara application iyo inoshandiswa mukati meiyo mamiriro enhoroondo. Izvi zvinoreva kuti rairo rekuraira application richaramba richikwanisa kunyora zita reti.
Imwe shanduko inomira pachena ndeye izvozvi mune iyi vhezheni itsva unogona kushandisa makiyi musanganiswa anosanganisira «AltGr, Ctrl uye Alt».
Zvakanaka ikozvino mune ino yekutarisa nyowani 4 iyo kiyi yeAltrGr ikozvino yaonekwa pamberi pekiyi inosunga mashandiro, saka inowanikwa kune vashandisi.
Iyo default kiyi mubatanidzwa wakapihwa neiyi vhezheni kuvhura iyo inodonhedza rondedzero iri "Ctrl + Shift + Space".
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve kuvhurwa kweiyi nyowani yekutarisa yeWindows Terminal, unogona kubvunza chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Windows » Yakatangisa yechina yekutarisa vhezheni yeWindows Terminal
Drauger OS: nyowani yemitambo distro iyo inovavarira kupa iyo console mushandisi ruzivo paLinux